« Indie » : mijoro amin’ny foto-kevitra « Do it yourself » – Buskers Magazine
Ara-bakiteny, ny Indie dia fanafohizana ny teny anglisy « independent ». Lazain-dry zareo Frantsay hoe indé, avy amin’ny teny « indépendant ». Ny « fahaleovan-tena » no dika-teny malagasy mifanakaiky indrindra aminy. Tany Angletera no nipoitra ny mouvansa indie, tao anatin’ny tontolon’ny rock, novohizin’ireo Punk mandà ny rafitra napetraky ny indostrian’ny kapila tamin’ny taona 70.
Endrikin’ny famokarana, fanantaterahana sy ny fanaparitahana ny vokatra artistika, mijoro amin’ny foto-kevitra « Do it yourself », izany hoe tsy miandry ny hafa fa manao araky ny zava-misy am-pelantanana na azo takarina, izay no azoko hamaritana tsotsotra ny Indie.
Mpanakanto na mpikarakara, miaina na mampiaina ny zava-kanto, mety ho safidy io mety nohon’ny sivana, ivelan’ny indostrian’ny kapila mangirana, izany hoe ivelan’ny tambazotra matanjaka eo amin’ny lafin’ny famokarana sy ny fanaparitahana ny sangan’asa.
Ny fahaleovan-tena sy ny fahalalahana, indrindra eo amin’ny lafin’ny famoronana sy ny fanatanterahana, na hoan’ny mpanankanto io na hoan’ny mpikarakara, izay no maha-indie ny Indie.
Ny Indie tsy miavona. Afaka miara-dalana amin’ny media na ny mpamokatra raha toa ka voaaja ireo fepetra etsy ambony ireo. Ny Indie dia fahavalon’ny kolom-body sy vola.
Hetsika karakarain’ny Buskers Magazine, Indie Madagascar dia sehatra hampivondronana, hanehoana sy hifampizarana ny zava-kanto sy ny kolontsaina malagasy azo sokajiana hoe indie. Manaja ny zon’ny artista namorona hanantanteraka am-pahalalahana ny kantony. Niatomboka tamin’ny volana desambra 2016 tao amin’ny Madagascar Underground Antsahavola – Antananarivo ka iriana hivoatra sy hitoetra eto Madagasikara. Amin’ny 01 aprily 2017 ny fihaonana manaraka ao amin’ny Is’Art Galerie Ampasanimalo – Antananarivo.
Nahoana no poezia sy mozika no atambatra an-tsehatra amin’ity andiany ity ?
Raha eo amin’ny lafin’ny mozika, amiko, ny Indie tsy voatery hoe rock, na dia marina fa akaiky aminy kokoa aza io tontolo io. Efa nivoatra io fironana io. Ny foto-kevitra ijoroany rahateo dia tsapako fa iraisan’ny mpanakanto maro samihafa, na inona na inona gadona vohiziny : reggae, trad, folk, eny fa na hatramin’ny pop aza.
Raha ny mozika indie fotsiny no navoitra tamin’ny Indie Madagascar voalohany, dia hivelatra hoan’ny poezia ny hetsika amin’ity, satria misy ny poeta azo lazaina hoe indie, mahaleo tena, sarotiny amin’ny zony halalaka eo amin’ny famoronana sy ny fanatanterahana, miaina sy mampiaina ny foto-kevitra indie, na fanahy iniana io na tsia.
Aiza ho aiza ny Indie eto Madagasikara ?
Efa teo foana hatramin’ny taloha ela be io fironan-kevitra io, fa ny anarana angamba no somary vaovao amin’ny olona. “Auto-production” kokoa angamba no mahazatra antsika hatramin’izay. Betsaka ny bandikely amin’izao manatalenta kanefa tsy misy mpanosika, ka miezaka mamorona sehatra etsy sy eroa. Izy ireo no antenain’ny Buskers Magazine ho tanin-ketsan’ny kolontsaina indie eto Madagasikara. Ny fanahy efa ao, ny famoronana samy manana ny hanitra ho azy, ny teknika efa mivoatra, fa eo amin’ny fahamatorana rehefa miseho an-tsehatra sisa no mbola misy indro kely, nefa azo amboarina soamantsara.
(Crédit image à la une : Matchbox D.)
Article précédentNy Ambanilanitra : l’indie-folk expérimental malgache
Article suivantBack-office : Dans les coulisses de l’émission rock « Distortion »
2 commentaires sur « « Indie » : mijoro amin’ny foto-kevitra « Do it yourself » »
» fahavalon’ny kolom-body sy vola »
siora mihitsy e! Mankahery am-pitiavana be